Akhri: Qiso iskuday dil la yaab leh oo xalay ka dhacday Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dhacdo kale oo naxdin leh ayaa xalay ka dhacday degmada Howl-wadaag ee magaalada Muqdisho, waxaana nin abti ah uu aashito ku gubay wiil ay dhashay walaashiisa, sidaa waxaa xaqiijisay Mako Siyaad Bulaale oo dhashay wiilka la gubay, uuna la dhashay kan wax gubay.
Wiilka la gubay ayaa waxaa lagu magacaabaa Cali Ibraahin Raage, waxaana Mako sheegtay in labada wiil uu ka dhaxeeyey khilaaf la xiriira ku noolaashaha guriga.
“Wiilka lagubay aashito ayaa lagu shubay, Indhihii ayaa buriyey, korkiina waa taqtaqay, dharkii iyo gogoshii uu ku jiifana waa buriyeen, waxaana loola cararay isbitaalka Madiino” ayey tiri Mako Siyaad.
Wiilka wax gubay ayaa baxsaday, waxaana ciidamada booliska ay saakay oo idil ka baadigoobayeen xaafadaha degmada Howldaag.
Todobaadkii lasoo dhaafay waxaa Muqdisho ka dhacay labo fal-dambiyeed dil ah oo loo adeegsaday toorrey iyo dil haweeney jirdil lagula khaarijiyey, kadibna laga helay ceel ku yaalla degmada Dharkeynley.
Dadka indha-indheeya xaaladaha Muqdisho ayaa u arka in dilkii loo adeegsan jiray hubku soo yaraanayo, islamarkaana uu badelayo dilka loo adeegsao farsamooyin kale oo cusub ama kuwii horay loo yaqaanay ah.